asp + Flash — MYSTERY ZILLION
ရှိပြီးသား Asp Webpage တခုမှာ တရုတ်စာ နဲ့ အင်္ဂစာ ဘာသာ၂ခုတင်ထားတယ် ။ အဲဒီ၂ခုထဲက တရုတ်စာဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲသိချင်လို့။ သူကFlashနဲ့ပေါင်းရေးထားတဲ့စာမျက်နှာပါ။ www.lacreation.com.cn ကိုတချက်ကြည့်ပေးပါ ။ သူ့မှာဆိုရင် တရုတ်စာက default ဖြစ်နေပါတယ် ။ တရုတ်စာကို Default မထားပဲနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို default ထားပြီး တရုတ်စာကို ဖြတ်ချင်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ ။ ကူညီကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
Localhost မှာတော့ စာမျက်နှာတက်လာပါတယ် ... အွန်လိုင်းပေါ်တင်လိုက်တော့ တချို့စာမျက်နှာတွေမပေါ်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ... path လမ်းကြောင်းတခုခုများပြောင်းရသလားမသိဘူး ... ကူညီကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
you need to point English website or base on your website coding. It'saIIS configuration. I can't help if I don't haveacontrol for IIS.